#Solskjær: "Ma Ogaan karo in u ciyaaridoono United xilli ciyaareedka soo socda" - Get Latest News From Horn of Africa
#Solskjær: “Ma Ogaan karo in u ciyaaridoono United xilli ciyaareedka soo socda”
Xiddiga Manchester United Paul Pogba ayaa mar kale ku celiyay inuu ka tagayo United xagaagaan. Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay suurtogal tahay inay calaamadeysan tahay xiddigaan, laakiin weli waxba kama soo cada, ciyaaryahanka reer Faransiis ayaa qandaraaskiisa United uu kula jira ilaa xagaaga 2021 isagoo haysta fursad sanad kale oo uu sii joogi karo.
Maanta, tababaraha Ole Gunnar Solskjær ayaa shir saxaafadeed qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlayey kulankii Barcelona ee Champions League – waxaana mar kale Norwegian uu su’aal ka keenay mustaqbalka Pogba.
– Paul Pogba ayaa rajeynaya in uu ciyaaro berrito. Waa ciyaaryahan mug ku leh Manchester United, Waa na mid ka mid ah ciyaartoydeena muhimka ah ee isha lagu wada hayo, sida ayuu u sheegay Solskjær BBC da.
– Wuu ogyahay in kulanka PSG (finalka CL-8) uusan aheyn kii ugu fiican. Waxa uu diirada saarayaa kaliya inuu shaqo fiican qabto kulanka berri ee Barcelona. Ma arkowax uu diidaya inuu u ciyaareynin Manchester United xilli ciyaareedka soo socda, waxaay ilaa tahay waa uu sii wadi doonaa xirfadiisa halkan.
Solskjær ayaa sidoo kale amaanay xidigaan reer Faransiis.
– Marka Paul uu ciyaar ficaan soo bandhigo, waxuu noqoneysa in isaag lawada eego taas oo fursad nasiin karta aan badino kulan sidan oo kale ah. Shaqadiisu waa inuu noqdo abuuraha, ku guuleysta kubadda isla markaana horay u qaadaa kubadda waxaana rajeynayaa inuu sameeyo berrito ficil wanaagsan, ayuu yiri Solskjær